Prof. Jawaari oo ku dhawaaqaya Musharaxnimadiisa Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka | SAHAN ONLINE
Prof. Jawaari oo ku dhawaaqaya Musharaxnimadiisa Guddoomiyaha Baarlamaanka dalka
MUQDISHO – Warar ay helayso Sahan Online ayaa sheegaya in siyaasiyiin miisaan culus leh ay kusoo biirayaan tartanka Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya.
Waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Maxamed Shiikh Cismaan(Jawaari) uu ku dhawaaqo in uu yahay musharax mar kale u tartamaya xilka guddoomiyaha Baarlamaanka dalka.
Prof Jawaari ayaa taageero badan ku dhex leh Xildhibaanadii hore ,sidoo kalena Xildhibaanada danbe ay si weyn ula dhaceen sidii uu u maamulay mudadii kala wareejinta,soo dhaweynta iyo sameynta Aqoonsiyada.
Prof Jawaari ayaa dadka dhaliila sheegaan in uu yahay qof aan Isticmaalin awoodda Baarlamaaniga ah ee uu leeyahya waxaase lagu amaanaa in uu yahay nin dowli ah oo garanaya nidaamka dowladnimo taasoo ka dhigtay Xafiiskiisa midka ugu maamul wanaagsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Ku dhawaaqista Jawaari ayaa hoos u dhigeysa damast Cabdirashiid Xidig uu ku doonayey in markii ugu horreysay wax uga bedelo nidaamka hab-qeybsiga.
Musharaxiinta kale ee Guddoomiyaha ku dhawaaqaya saacadaha soo socda waxaa kamid ah Maxamed Mursal oo Wasiir ka ahaa Xukuumadii Federaalka oo isaguna ah nin miisaan culus ku leh Siyaasada.
Dhanka kale guddoomiya kuxigeenka 1aad ayaa waxaa u taagan ilaa iyo 5 Xildhibaan ,Wasiirkii hore ee Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa Siciid Xuseen Ciid ayaa kamid ah xubnaha u tartamaya sanadkan in uu noqdo Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ,waxaana kamid ah Xildhibaanada u tartamaya Khadiija Diiriye ,Cabdiweli Muudey iyo Jeylaani Iikar.